Ahoana ny fomba hakanana ny LG G3 ary tsy ho faty manandrana | Androidsis
Ahoana ny fomba ahazoana Root amin'ny LG G3 kinova rehetra
Androany aho te hampianatra anao ny fomba marina, misaotra an'ireo mpampiasa indray avy amin'ny forum fampandrosoana Android tsara indrindra izay tsy iza fa izy Forum XDA. Ny fomba mahazo fahazoan-dàlana amin'ny LG G3 amin'ny maodely sy variants rehetra an'ny terminal.
Ahoana ny fomba hampahatsiahivana azy ireo foana fa izay rehetra ataony amin'ny terminal dia mety hampidi-doza sy ny kaontin'ny mpampiasa tsirairay, ary amin'ny fanatanterahana an'io dingana miorim-paka io izay, amin'ny farany, hananantsika fidirana amin'ny fitantanana. misy rakitra avy amin'ny rafitra fiasa LG G3 hanao sy hanafoana araka izay tiantsika koa ho very ny fiantohana ofisialy momba ny vokatra. Fantatrao izao fa ny andraikitra handroso dia tsy maintsy raisinao samirery.
Este tutorial hahazoana Root amin'ny LG G3 Tokony ho mandeha amin'ny maodely rehetra misy ny terminal izy io, avy amin'ny maodely koreana F400K, hatramin'ny maodely iraisam-pirenena D855 mandalo ny karazany rehetra toy ny Sprint (LS990), Verizon (VS985), AT & T (D850), T-Mobile (D851) ary Canada (D852).
2 Ilaina ny fisie mba hahazoana faka amin'ny LG G3
3 Fomba hahazoana faka ao amin'ny LG G3
Ny voalohany indrindra dia misintona ary apetaho ireo mpamily ofisialy an'ny LG G3 avy amin'ity rohy ity ihanyRaha vao sintonina sy apetraka dia hamerina ny solo-sainantsika manokana isika, mampifandray ny LG G3 amin'ny alàlan'ny tariby USB -ny ary miandry an'i Windows hahafantatra azy samirery.
Ankehitriny dia tsy maintsy mandeha any amin'ny menio an'ny Fikirana LG G3 Momba ny mombamomba ny telefaona / rindrambaiko y tsindrio impito misesy eo amin'ilay tsipika milaza ny isa isa, amin'ity no ahafahantsika a fizarana vaovao amin'ny toe-javatra antsoina hoe safidy mandroso izay tsy maintsy ampidirintsika hampavitrika ny debugging USB. Ao anatin'ilay horonan-tsary napetrako teo ambonin'ireto tsipika ireto dia namela anao horonantsary iray aho hanazavana azy aminao ara-maso.
Ilaina ny fisie mba hahazoana faka amin'ny LG G3
Ny rakitra ilaina hahazoana fahazoan-dàlana amin'ny LG G3 dia voafetra amin'ny iray ihany rakitra voafintina amin'ny endrika ZIP izay ampidininay avy amin'ity rohy ity ihany ary ho aiza isika esory ny toerana rehetra ao amin'ny solo-sainay Windows, kokoa ary raha te hanana azy bebe kokoa ianao, dia manoro hevitra anao aho hamoaka azy io mivantana amin'ny birao Windows.
Ankehitriny dia hijanona eo ihany izany mampifandray ny LG G3 anay misy ny karazany ankehitriny amin'ny alàlan'ny tariby USB amin'ny solosainao manokana ary araho tsara ireto dingana ireto.
Fomba hahazoana faka ao amin'ny LG G3
Raha vantany vao voahitsoka ny rohy ZIP alaina amin'ny dingana teo alohany dia miditra amin'ny fampirimana misy azy isika ary hahita zavatra mitovy amin'ity:
Miaraka amin'ny LG G3 mifandray amin'ny solosaina manokana, tsindrio ny rakitra run.bat hanatanterahana ny varavarankelin'ny baiko MS-Dos izay tsy maintsy tsindrio ny bokotra rehetra hanohizana.
Tokony ho izao ny LG G3 misy antsika avereno irery amin'ny fomba fanarenana araka ny asehoko anao amin'ny sary etsy ambany. Indray mandeha amin'ity maody ity dia hampiasa ny bokotra volume isika hidina amin'ny safidin'ny Vaovao farany aply avy amin'ny adb izay hamafisinay amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra fahefana.
Hiseho indray ny varavarankelin'ny baiko iray izay tsy maintsy tsindrio indray misy lakile hitohy. Ataontsika izany ary miandry ny LG G3 dingana tsy maintsy hongotantsika vita soa aman-tsara, amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy hamerenantsika azy io amin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ilay safidy Reboot rafitra izao avy amin'ny stock Recovery ihany.
Raha vao manomboka indray izy io dia tsy maintsy mankany amin'ny Google Play Store ary misintona izay mpandrindra superuser toa ny SuperSu na SuperUser.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » Ahoana ny fomba ahazoana Root amin'ny LG G3 kinova rehetra
malahelo ny fanavaozana x ota ianao?
Amin'ny root dia azonao atao ny manohy manavao fa raha mametraka fanarenana namboarina ianao dia tsy ho afaka hanavao amin'ny alàlan'ny ota fa hanao biriky ny telefaona koa.
Alex Omegarojo dia hoy izy:
Miarahaba an'i Diego, satria manome hevitra ianao fa ny LG G3 dia biriky rehefa mametraka fanarenana mahazatra
ClockworkMod no tianao holazaina ?? Antenaina fa azonao atao ny manazava ny antony maha-brickea azy. Misaotra!
Valiny tamin'i Alex Omegarojo
Renner dia hoy izy:
Tsara ny tolakandro, vao vitako ny fizotrany ary rehefa akaiky ho vita io dia asehon'ny efijery LG ireto:
"E: tsy nahomby ny fanamarinana ny sonia fisie tanteraka. E: tsy nahomby ny fanamarinana sonia »Ahoana no fomba hamahana an'ity olana ity? MISAOTRA
Mamaly an'i Renner
Pablo Cava dia hoy izy:
Tsara Renner, izany dia noho ianao nanavao ny findainao amin'ny kinova farany ary ity karazana Root ity dia tsy mandeha amin'ilay kinova. Nanana olana mitovy amin'izany aho ary namaha izany tamin'ny alàlan'ity fomba hafa ity: http://forum.xda-developers.com/lg-g3/development/root-root-lg-g3-easily-purpledrake-lite-t2821000
Valiny tamin'i Pablo Cava
Tsy mandeha ve ny Lollipop 5.0 ????
Manana ny LG G3 D855 miaraka amin'i Lollipop 5.0 aho
ROA NITATRIKA ARY TE HANARAKA NY LG3. AIZA NO TOKONY MBOLA HAHAZOANA NY FILES ilaina ilaina amin'ity tanjona ity?
Valio amin'i DAVID
PH03N1X dia hoy izy:
TSY MISY INDRINDRA IZAO NY FILE FAOTRA.
Valiny amin'ny PH03N1X